Mabaadi'da Xisbiga WADDANI
Xisbiga WADDANI waxa uu:
Sugayaa sinnaanshaha buuxa ee muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland, korriinka dheelli-tiran ee goballada dalka iyo saami-qeybsiga kuraasta iyo kheyraadka dalka oo si caddaalad ah loo qaybsado.
Hirgelinayaa ku-dhaqanka qaynuunka iyo xeerarka dalka u yaalla iyada oo la dhawrayo xorriyadaha aasaasiga ah iyo badbaadada dadka.
Hoggaminayaa qaran ku ab-tirsada taariikhdiisa hodanka ah ee ka soo xidhiidhsan xaddaaraddii Awdal, boqortooyada Bariga Sanaag, halgankii daraawiishta, halgankii gumeysigii lala galay iyo halgankii dib-uxoreynta qaran ee SNM.
Ballan-qaadayaa ku-dhaqanka hab xisaabeedka maaliyadda oo daah-furan iyo isla-xisaabtan joogto ah.
Dhammaystirka mashaariicda qaran ee ahmiyadda leh ee socota, sida waddada Ceerigaabo.
Ilaalinayaa xuquuqda qeybaha bulshada ee dulman ee ay ka midka yihiin beelaha dulman, haweenka, dhallinyarada, iyo naafada; isaga oo dammaan- qaadaya in ay si buuxda uga qeyb-galaan qaab-dhismeedka Xisbiga iyo ka Xukuumadda Xisbiga WADDANI ba.
Ka soo horjeedaa nooc kasta oo takoor ah oo bulshada Jamhuuriyadda Somaliland u kala qaybinaya qabaa’il, jinsi, gobol iyo nooc kasta oo kale oo kala- qoqob ah.